Si fudud Bedelka SMS ka iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone in Android
Just iibsaday Edge Samsung Galaxy qod6 ah +. Sidee baan ku wareejin kartaa fariimaha SMS ka iPhone 5 si aan cusub Galaxy qod6 Edge + ? Mahad badan.
Hel phone Android ama Dhuxul Daba-cusub iPhone dhaldhalaalaan, sida iPhone 6s (daray)? Aad u jecel yihiin inay xoog SMS ka iPhone jir ah u gudbiyaan leh? Si ka iPhone nuqul ka SMS si fudud, sida ugu wanaagsan ee waa in la helo qalab thrid-yar oo loo isticmaalo si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya telefoonada. Halkan, waxaan idinku si adag ugu talinaynaa qalab kala iibsiga telefoonka, in uu yahay, Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxay awood u aad si toos ah u guuraan SMS, oo ay ku jiraan kuwa kooxda on your iPhone in phone Android oo iDevice kale.
iPhone kala iibsiga SMS saddex tallaabo
Download qalab iyo raac tutorial soo socda in ay sameeyaan kala iibsiga SMS ah. The Screenshot socda ee ku saabsan SMS wareejinta ka iPhone in phone Android la version Windows yihiin. Tallaabooyinka la mid yihiin oo kaliya marka you'r isticmaalaya version Mac ah.
Tallaabada 1. Run MobileTrans on PC
Marka hore, waa in aad u MobileTrans on PC ka dib markii aad u rakiban. Markaas, furmo suuqa hoose ka muuqan doontaa PC. Guji Start . Si aad SMS ka iPhone dhaqaaqo la MobileTrans si sax ah, waa in aad la rakibi Lugood on your computer.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans shaqaysaa si fiican u la iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS in ay maamulaan macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone iyo Android / iDevice kale
Marka labaad, isku xiro labo qalabka si aad u PC via fiilooyinka USB. MobileTrans Iyaga lagu ogaan doono sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku xiran yihiin. Sax xogta oo cad ka hor inta koobi si aad u faaruqiso sanduuqa SMS iPhone ee. Haddii aadan u baahan tahay, kaliya keliya ha.
Fiiro gaar ah: Guji Flip in la beddelo meelaha aad telefoon il iyo caga mid ka mid ah marka aad u baahan tahay.
Tallaabada 3. Transfer SMS ka iPhone in qalab Android / macruufka
iPhone inay kala iibsiga Android: xiriirada, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, videos, muusig iyo sawiro lagu wareejin karaa.
iPhone in iDevice : fariimaha qoraalka ah, xiriirada, jadwalka taariikhda, videos, muusig iyo sawiro la koobiyeyn karaa.
Si aad SMS kala iibsiga kaliya, idinku waajibka ah inaad uncheck marks ka hor alaabta kale ee u dhigma. Markaas riix "Start Copy" si ay u bilaabaan kala iibsiga. Ka dhig qalabka aad ku xiran waqtiga oo dhan. Marka uu dhamaado, ku dhacay "OK".
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone